MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » H.E. U Tha Aung Nyun presented Credentials to the President of Fiji
H.E. U Tha Aung Nyun presented Credentials to the President of Fiji
by adminmofa on 14/07/2017 at 5:24 PM
U Tha Aung Nyun, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Republic of Fiji, presented his Credentials to His Excellency Major-General (Ret’d) Jioji Konusi Konrote, CF, OF(Mil), MC, SBSt.J, MSD, OMRI, NOC, President of the Republic of Fiji on 11 July 2017, in Suva.
Dated. 14 July 2017
သံအမတ်ကြီး ဦးသာအောင်ညွန့် ဖီဂျီနိုင်ငံ သမ္မတထံ ခန့်အပ်လွှာပေးအပ်
ဖီဂျီသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးသာအောင်ညွန့်သည် ၎င်း၏ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ဆူးဗားမြို့၌ ဖီဂျီသမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ ဗိုလ်ချုပ်(အငြိမ်းစား) ဂျော်ဂျီ ကွန်နူစီ ကွန်ရော့တီ ထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်